Limlahlile icala owagwazwa, wabulala izingane ayezigada
Umzanyana owayethenjwa kakhulu wumndeni wezingane ezimbili ayezigada, owabulala lezi zingane abazali bazo bengekho, ulahlwe yicala lokubulala.
Ugwetshiwe umama owabulala izingane zakhe ezinhlanu ngokuzigwilizisa zisanda kuzalwa
Usenkantolo umama 'owabulala' izingane ngoshevu
Ugwetshiwe umama owabulala izingane zakhe ngokuzigwilizisa kubhavu
Ingane idubule umama wayo okhulelwe ngesibhamu sikayise
Ingane yentombazane eneminyaka emithathu ubudala idubule umama wayo okhulelwe ngephutha ngemuva kokuthola isibhamu sikababa wayo kanti sinezinhlamvu, kusho amaphoyisa.
Ingane idubule ngephutha umama wayo ngesibhamu sikayise
Ingane, 8 idubule umkhulu wayo ekhanda icabanga ukuthi isibhamu sethoyizi
Ingane idubule ezinye enkulisa
Ingane yentombazane eneminyaka engu-3 ubudala yase-Indiana idubule ngephutha umama wayo ozithwele.
Ingane,2, idubule umfowabo omncane ebusweni
Kubhubhe abangu-21 kugingqika iloli ebelithwele abantu abebeya emshadweni
Kushone okungenani abantu abangu-21 abebelibangise emshadweni ngesikhathi iloli abebehamba ngalo liphonseka ebhulohweni, kusho amaphoyisa.
Kudutshulwe kwabulawa umculi enandisa emshadweni
Zimkhalele umakoti obeshayela 'edle amponjwana' eya emshadweni wakhe
Kushone abantu abangu-31 kugingqika iloli ebelithwele abantu abebelibangise emshadweni
Kudutshulwe kwabulawa umculi wasePakistani obesenezinyanga ezingu-6 ezithwele emshadweni ekuqaleni kweviki.
UChris Brown ufuna ukusula amakhonsathi akhe
Kudutshulwe kwabulawa umculi
Kudutshulwe umculi wakuleli eMidrand
Kushone oyedwa kuqubuka umlilo ebhilidini likaMengameli wezwe
Owesilisa oneminyaka engu-67 ubudala ushonile ngemuva kokuqubuka kwelangabi efulethini lakhe.
Ubudedengu bomuntu obhemayo yibo imbangela yokusha kwesitolo
Kulimale abangu-8 kanye nezimoto kuwa ibhilidi eKZN
Kushone abangu-14, kwalimala abaningi kusha ibhilidi
Uzibulele odubule walimaza abantu emahhovisi eYouTube
California – Owesifazane uvulele ngenhlamvu ephethe isibhamu esincane ekomkhulu le-YouTube ngaseSan Francisco, walimaza abantu abathathu ngaphambi kokuba azibulale.
Abafundi bazobhikishela ukuphathwa kwezibhamu
Iboshiwe inja elume usana olunezinsuku luzelwe, lwashona
Ushonile umfanyana ozidubulele ethoyilethi lasesikoleni
Iboshiwe indoda eyagwaza abazali yaliwe intombi
Indoda eyayiphatheke kabi ngokwaliwa yintombi yayo yakhiphela isibhongo sayo kubazali bayo.
'Ubulale' isoka ngoshevu owaliwe
Usabisa ngokuzibulala owaliwe
Uziqophe ezibulala owaliwe yintombi
Kuboshwe umama kutholakala izingane zishonile emotweni
Umama oneminyaka engu-20 ubudala uboshiwe ngezinsolo sokubulala ngemuva kokutholakala kwezingane zakhe ezimbili zishonile emotweni, kusho izikhulu.
Kuboshwe abasebenzi bakaMasipala ngelokukhwabanisa
Uyavela owesilisa 'obambe inkunzi, wadlwengula' usomabhizinisi e-E Cape
Isigwebo sentambo kowabulala owesifazane wafaka isidumbu sakhe epotimendeni
Abameli besiboshwa esilindele ukubulawa, esidume ngelika"suitcase killer", sebefake isicelo eNkantolo eNkulu yaseMelika ngemizamo yokumisa ukubulawa kwaso okuhlelelwe namhlanje.
Zimkhalele owesifazane kutholakala ingane ephilayo epotimendeni
Uvelile owazibelethisa wafaka ingane epotimendeni
Owesifazane waseningizimu-ntshonalanga yeFrance owagwilizisa izingane zakhe ezinhlanu zisanda kuzalwa wabe esethukusa izidumbu zazo esiqandisini, ugwetshwe iminyaka engu-8 ebhadla ejele.
Ugwetshiwe umama waseThekwini ngokuqamba amanga ngokuthunjwa kosana lwakhe
Ugwetshiwe umama owashisa ingane iphila
Kuboshwe umama osakaze ingane phansi ngekhanda yashona
Kuboshwe umama nobaba ngokufa kwengane
Kuboshwe umama kutholakala izingane ezanyamalala ngo-1985
Umfana,12, udubule wabulala umngani eThekwini
Umfana ona-4 udubule unina
Umfana, 4, udubule wabulala udadewabo ngephutha
Kuphahlazeke ibhanoyi elincane kwashona 10 wabantu
Ibhanoyi elincane ebelithwele abantu abahlanu liphahlazeke phezu komuzi ngemuva kancane nje kokuba lisukile eManila, kwashona bonke ebebephakathi kanye nabanye abantu abahlanu ebebelapho okwenzeke khona ingozi.
Kuphahlazeke ibhanoyi lamaphoyisa ezintabeni zoKhahlamba
Umndeni wakwaGupta ungase udlelwe ibhanoyi
Kudingeke lihlale kwelinye izwe ibhanoyi ngenxa yezithandani
Ubizelwe amaphoyisa obanjwe enuka amaphenti angcolile
Owesifazane osemncane uvele waphithanelwa yikhanda wabiza amaphoyisa ngemuva kokubamba omunye wabantu ahlala nabo enuka amaphenti akhe angcolile.
Ukhonjwe afike ngayo eZambia uZodwa Wabantu
Owesifazane ubanjwe elele neshende, kumyeni kubonwa ngokusa esibhedlela
Kushone iziboshwa ezingu-7 kuqubuka udlame ngaphakathi ejele
Kushone iziboshwa eziyisikhombisa kwathi ezingu-17 zalimala kabi ngesikhathi zilwa zodwa ejele elithathwa njengelinezokuphepha eziqinile eSouth Carolina.
Beziphethe nesibhamu sethoyizi iziboshwa ezibulawe ngaseGreytown
UMnyango wethembisa ngokuzibamba iziboshwa ezeqe eSun City
Seziboshwe zonke ebezeqe ejele lasePollsmoor
Useboshiwe oweqa ejele eminyakeni engu-35 eyedlule
Amaphoyisa ase-United States athi isiboshiwe indoda eyeqa ejele lase-Oklahoma eminyakeni engaphezu kwengu-35 eyedlule.
Sekuboshwe owengozi ebulale izintombi
Uboshiwe umshayeli webhasi ebulale izingane
Useboshiwe owabulala ishende lomkakhe
Kushone 3 imoto ishayisa indawo yokudlela
Kushone okungenani abantu abathathu ngesikhathi imoto ishayisa isitolo sokudlela esisedolobheni laseGermany, iMunster, ngaphambi kokuthi umshayeli azingqokloze ngesibhamu.
Imoto ishayise yabulala 23 wabantu ephathini
Kulimale 15 imoto ishayisa abantu
Kushone owesilisa imoto yakhe ithungeleka ngomlilo
Buka: Kuginqike iloli yasesekisi kwafa indlovu kwalimala ezinye
Kufe indlovu kwalimala kanzima ezinye ezimbili ngemuva kokuginqika kweloli yasesekisi emgwaqeni omkhulu oseningizimu nempumalanga yaseSpain.
Idliwe yingwe intombazane ena-8 esekisi
Owesekisi uhlaselwe yibhubesi abedlala nalo
UMalema uphendula iPhalamende isekisi - CDP
Kushone abangu-17 ibhasi lishayisa isigxobo sikagesi
Kushone okungenani abantu abangu-17 kwathi abanye abangu-36 balimala ngesikhathi ibhasi ebithwele abafuduki ishayisa isigxobo sikagesi empumalanga yeTurkey yabe isigqamuka amalangabi, kusho umbiko.
Kushone abangu-13 engozini yebhasi
Kushone 12 wabantu, kwalimala abanye abaningi engozini yebhasi
Kushone 14 engozini yebhasi netekisi
Wathola impama owakhononda ngengane eyayikhala into engapheli eRestaurant
Owesifazane wavele wathukuthela ngesikhathi indoda ikhala ngomsindo owenziwa yingane yakhe eyayiqandula endaweni yokudlela.
Buka: UDJ 'efaka' impama imenenja yomrepha
Uqhasabulwe ngezimpama obesheshisa iphepha
"Yangivusa phansi impama ka-AKA"
'Kungenzeka ukuthi isisebenzi esabulawa yibhubesi sakhohlwa wukuvala isango'
Izikhulu ziveze ukuthi kungenzeka ukuthi isisebenzi salapho okugcinwa khona izilwane (zoo), esibulawe yibhubesi enkabeni yeMexico, sakhohlwa wukuvala isango elihlukanisa indawo yokudla nokulala yalezi zilwane.
Kuboshwe ababili ababulale ibhubesi ngoshevu
Kufunwa ibhubesi eleqile eLimpopo
Usola imimoya emibi owabhaxabula unkosikazi enkonzweni
Ufuna ukunxeshezelwa ngemali eshisiwe othi waboshelwa ubala
Udedeliwe owase-KZN owayeboshelwe ukudlwengula indodakazi
Bazonxeshezelwa ngezizumbulu ababoshelwa ubala e-KZN
Kushone 43 ibhasi liphuma emgwaqeni, lashayisa isihlahla
Ubonga elakubo osinde engozini edlule nenqwaba
Usejele ubaba osolwa ngokudlwengula amadodakazi akhe
Kuboshwe ubaba ngezinsolo zokuzibandakanya ocansini namadodakazi akhe angamawele.
Kuboshwe ubaba nendodana ngelokuzama ukubulala
Kuboshwe indoda ngokugwaza ibulale ubaba wayo
Kuboshwe ubaba ngokutholakala kwesidumbu sengane esikhwameni